Njengoba manje ingane yakho ivele izalwa, ufuna ukuthola ukulawula okungaphezu kokuzala kwakho. Kodwa ngesikhathi sokuncelisa, izakhi eziningi zokuvimbela izisu ziphikisana. Funda ngezinzuzo nezinsalela zezindlela ezehlukene zokuvimbela ukukhulelwa. Mayelana nokuthi yiziphi izakhi zokubeletha zingcono ukuthatha emva kokubeletha, futhi kuzoxoxwa ngezansi.
Uma ukuncelisa ibele kungavamile, isikhathi sokuqala sokuya esikhathini kungenzeka senzeke ezinyangeni ezintathu emva kokubeletha. Uma udla njalo, khona-ke umjikelezo ubuyiselwa emuva kwesikhathi. Kodwa udinga ukukhumbula ukuthi i-lactation ayivikeli ngokukhulelwa! I-ovulation yokuqala ivela ngemva kokubeletha ngaphambi kokuya esikhathini. Ngakho-ke, abesifazane bavame ukukhulelwa futhi ngokungazelelwe ngokwabo. Uma uxoxa nodokotela, ungakhetha ukuthi iyiphi indlela yokuvimbela ukubeletha efanelekile ngendlela yakho yokuphila nesimo sezempilo. Sizokwenza kube lula ukukhetha kwakho.
Thatha ukuhlolwa kwe-ovulation
Lokhu kufanele kwenziwe noma ngabe yikuphi. Ukuhlolwa ngokwayo akuyona indlela yokuzivikela ekukhulelweni, kodwa kusiza ukunquma indlela efanele yokuvikelwa.
- Isenzo: Leli yincwajana encane yokunquma izinsuku ezivundile ezisekelwe emgqonyeni wesibeletho noma kumchamo, noma ngokusho kokushisa komzimba.
- Izinzuzo: Azikho imiphumela emibi, ukuphepha. Ungaphakamisa izindlela ezenzakalelayo-ezishisayo zokuvimbela ukukhulelwa. Utshela isikhathi esihle sokukhulelwe uma ufuna ukukhulelwa ngokuphindaphindiwe.
- Ukungalungi: Ngomjikelezo ovamile ukuhlolwa kuyathembekile. Ukudla okusha, ukuhamba, ukutheleleka, ukuncelisa - konke lokhu kungaholela ekuphazamiseni imiphumela. Phakathi nezinsuku ezivundile, amakhondomu kanye / noma amaphilisi wesifazane kufanele asetshenziswe.
Indlela engeyona imithi yokwelapha
Uma ungavumelani ukuthatha imithi yama-hormone noma ngenxa yempilo yakho, awukwazi ukuthatha yona - lena imithi ekahle kuwe. Ikuvumela ukubuyisela ngokushesha umsebenzi wokubeletha ukukhulelwa okulandelayo, uma usulungele.
- Isenzo: Kunezindlela eziningi le ndlela isebenza ngayo. Ubonisa izinsuku ezivundile ezisezingeni lokushisa komzimba njalo ekuseni (njalo endaweni eyodwa: emlonyeni, endlebeni, emzimbeni), ubukele ubusikazi bomzimba kanye / noma ubuso bomlomo wesibeletho.
- Izinzuzo: Kumahhala. Ngokwemvelo, indlela engeyona invasive nayo inhle ngoba akukho ukuphazamiseka emzimbeni. Futhi le ndlela izokusiza ukhethe usuku lokukhulelwa.
- Ukungalungi: Le ndlela idinga ukuqeqeshwa nokusetshenziswa okucophelela. Ukusebenza kwalo kuncishiswe ngesikhathi sokudla, ukuhamba, izinguquko ekudleni, ukucindezeleka. Ezinsukwini ezivundile, kufanele ugweme ukulala ngokocansi (noma sebenzisa ikhondomu kanye / noma i-pessary yangasese).
Indlela enhle yokuncelisa, futhi uma uthola ukomile kwesisu. Kubuye kube nokuvikeleka okwengeziwe kwekhondomu.
- Isenzo: Amathebulethi ase-vaginal aqukethe izinto ezivimbela ukulimaza nokubulala i-spermatozoa. Ubuningi obukhuni bubavimbela ukungena esibelethweni. Isebenza kuphela ihora elilodwa, kodwa lwanele ubuhlobo.
- Izinzuzo: Indlela ayithengi, engenzi-invasive, iyatholakala ngaphandle kwemithi. It isetshenziswa njengoba kudingeka. Ithuthukisa ukugcoba kwesisu.
- Ukungalungi: Indlela ayithembekile ngokwanele. Ithebhulethi kufanele ifakwe emkhatsini wamaminithi ambalwa ngaphambi kocansi, bese ulinda kuze kuphele. I-foam ekhululekile idalwa, ngezinye izikhathi ebangela ukuzwa okungajabulisi (ngendlela yokweqa) ngesikhathi socansi. Ngezinye izikhathi amaphilisi abangela ukuhlunga nokuqothula. Kungakapheli amahora angu-6-8 awukwazi ukugeza ubulili, okungekho okulula kakhulu.
Ukwelashwa kwe- Hormonal
Ngesikhathi sokuncelisa, ungasebenzisa umuthi owodwa kuphela. Izindlela zokubeletha ezinomzimba ezimbili zingcono kakhulu ezingasetshenzisiwe emva kokubeletha, ikakhulukazi uma unesivivinyo esinzima kakhulu futhi esibuhlungu, umjikelezo ongavamile, i-hirsutism, i-acne. Ngakho-ke, odokotela bangancoma isidakamizwa esisodwa se-hormone, njengeHarmonet noma i-Mercilone.
- Isenzo: Isidakamizwa siqukethe i-estrogen ne-progestin emazingeni aphansi, kodwa anele ukuvikela ukukhulelwa. Lawa ma hormone avimbela ukuvuthwa, ushintshe ukubunjwa nokuqina komswakama wesibeletho, ungadluli isidoda futhi uvimbele ukufakwa kweqanda elikhulelwe.
- Izinzuzo: Isidakamizwa sinciphisa ubuhlungu bokuya esikhathini nokudla kwawo. Ingakwazi ukuthuthukisa isimo sesikhumba, ukunciphisa ukukhula kwezinwele emzimbeni, ukulawula umjikelezo, ukunciphisa ukungezwani ngaphambi kokuya esikhathini. Kunciphisa ingozi yokuthuthukisa umdlavuza wama-ovari, umdlavuza we-colon, umdlavuza we-endometrial, i-osteoporosis kanye ne-endometriosis.
- Ukungalungi: Ukwamukelwa kufanele kube kuhlelekile. Lokhu kungabangela izinambuzane, ikhanda, inzuzo, ukukhukhumeza emaphethelweni, izinkinga zesikhumba. Kwandisa kancane ingozi yomdlavuza webele. Kunconywa kwabesifazane abahlukunyezwa yi-migraines, abhema kakhulu (emva kweminyaka engama-35), bane-cholesterol ephezulu, i-thrombosis (ukuxhuma kwe-venous, ingozi ekhulayo), ukwehluleka kwesibindi, isifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophezulu. Emukelwayo i-libido ibuhlungu kakhulu.
Uma ngenxa yezizathu zezokwelapha awukwazi ukuthatha imithi yama-hormone, futhi ungafuni ukuqapha njalo isikhathi sokuvuthwa kwakho, le ndlela iwukuba kuwe.
- Isenzo: Izijovo ze-intramuscular progesin kufanele zinikezwe njalo ezinyangeni ezintathu. Baqeda ukuvuthwa kwegazi, kuholela ekushintsheni emgqonyeni womlomo wesibeletho (umgoqo wesilisa) kanye ne-endometrium (evimbela ukufakelwa kweqanda elivuthiwe.) Ekupheleni komjikelezo wokuqala wesidakamizwa, ukuvakashela ku-gynecologist kuyadingeka.
- Izinzuzo: Ukwelashwa kwalolu hlobo kuvunyelwe ukusetshenziswa kuphela izikhathi ezine ngonyaka.
- Ukungalungi: La ma hormone enza isikhathi esithile, futhi awukwazi ukuwayeka, ngisho noma uzizwa ungalungile ngemva kwabo. Ukuthatha izidakamizwa kungabangela ukuphuma kwegazi ngokweqile. Ngemuva kweminyaka eminingana yokungena, kunengozi enkulu yokwelashwa kwe-osteoporosis. Ngezinye izikhathi ukubuyela emjikelezweni ojwayelekile kungadlulela unyaka noma ukuya esikhathini kudingeka ukuba "kusizwe" ukuze kutholakale izindlela zokwelapha ezikhethekile.
Le ntsha isiyitholile udumo emhlabeni wonke. Le ndlela ihambisana nayo yonke imigomo yokukhulelwa kwe-hormonal, kodwa akudingeki ukuthi uthathe amaphilisi nsuku zonke, unesifo sesibindi nesimiso sokugaya. I-plaster ayibonakali, iphephile futhi ilula. Kodwa kukhona "izinkomba" ezithile.
- Isenzo: Isithako esisebenzayo sihlanganisa ama-hormone - i-estrogen ne-progestin. I-plaster ingaxhunyaniswa emahlombe, emahlombe, izandla, isisu. Ikhulula ama-hormone engxenyeni yegazi futhi ivimbela inqubo yokuvuthwa.
- Izinzuzo: Into engena egazini hhayi ngesisu, ngakho ukuhuda nokuhlanza akunciphisi imiphumela yomuthi. Ukusebenza kahle kusasebenza. Shintsha ubeka kanye kuphela ngesonto.
- Ukungalungi: Ngezinye izikhathi i-band-aid ingaphula emaphethelweni (khona-ke isebenza kancane kancane), futhi ingcolile. Kungabangela ukuhlakulela kwendawo. Akufanelekile abesifazane besisindo esingaphezu kuka-80 kg (kubo ama-hormone amancane kakhulu). Ukuphikisana kwezidakamizwa kufana nokuphilisa amaphilisi.
Lolu hlobo lokukhulelwa lungcono emva kokubeletha. Uma ungahle uhlele ukuba nezingane futhi ungafuni ukukhumbula ukuthatha amaphilisi nsuku zonke futhi usebenzise amakhondomu - lena indlela yakho yokuvikela. Kuyakufanelana nawe uma unqatshelwe ekusebenziseni kwamahomoni.
- Isenzo: Ukufaka okufana ne-T okufakwe esibelethweni kungase kube nokuthutha (isibonelo, i-Nova T, i-Multilod) noma i-hormone (i-Mirena, i-Lady Insert). Kukhona ushintsho ekusithekeni kwegciwane lesandulela ngculazi (u-sperm motility wehla) futhi ukuhamba kweqanda kanye nokufakelwa kwayo esibelethweni akunakwenzeka. Ukuvuthwa ngokwayo kuvimbela ukutshalwa kwembungu.
- Izinzuzo: Lena yindlela enkulu kakhulu "yesikhathi eside". Kuzokuvumela ukuthi ukhohlwe ukukhulelwa ngokweqile iminyaka emithathu noma emihlanu. Ukuvunguza kusebenza kuphela ezingeni lendawo. Ukushisa komkhuhlane kungaholela ekunciphiseni esikhathini sokuya esikhathini, isikhathi saso kanye nokwehla.
- Ukungalungi: Ukufakwa kwe-spiral kudinga ukuvakashela umjozi wezifo zegazi futhi kungaba nobuhlungu. Kukhona ingozi yokulimaza kwesibeletho (nakuba iyingcosana). Ukufakwa okungalungile kuvame ukwandisa isikhathi sokuya esikhathini kunyuke ubuhlungu bokuya esikhathini. Kwangathi kungakhuthazwa ukutheleleka kwegciwane lesisu. Futhi angeke isetshenziswe ngabesifazane abahlukunyezwa ngethusi.
Izindlela eziphumelelayo zomuntu zokuvimbela ukukhulelwa
I-bhisikidi elula ye-ginger
I-Anti anti-cellulite stick stick kusuka ku-GUAM
Izixazululo zezinyosi: kanjani ukukhetha okungcono kakhulu?
I-Metama ne-chickpeas no-utamatisi